#Madagascar : Miverina ny fahazoan-dàlana hosoka | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Miverina ny fahazoan-dàlana hosoka
Misy olona mamoaka taratasy fahazoan-dàlana hosoka indray eto an-dreni­vohitra sy ny manodidina. Hisy ny fepetra horaisina mahakasika izany.
Mahita làlana foana. Miverina mampiasa taratasy fahazoan-dàlana manokana hosoka indray ireo fiara sasany miasa eto an-drenivohitra sy ny manodidina mila mampiasa izany. Avy eny amina « cyber » vitsivitsy misy eto an-drenivohitra no hakan’ireo tompom-piara na mpamily izany.
Efa nandraisana fepetra anefa izany teo aloha ary niakatra tribonaly mihitsy na dia tsy mbola nivoaka mandraka androany aza ny fitsarana ny raharaha. Noho ny hakamoan’ireo tompom-piara na mpamily mivezivezy mikarakara izany fahazoan-dàlana manokana izany eny amin’ny foiben’ny ATT eny Nanisana sy noho ny fahazaran-dra­tsy no antony anaovan’izy ireo hosoka. Nilaza handray fepetra ny tale jeneralin’ny ATT, Razakarivony Mamy Gérard Ramahandry.
« Efa nangina tanteraka io resaka hosoka io satria efa nisy ny tratra nanao izany ka niakatra fitsarana. Gaga amin’ny fisian’izany indray izahay ankehitriny. Na izany aza dia tsy maintsy hisy ny fepetra horaisina. Ny fisavana tampoka eny anivon’ireo cybercafé amin’ny toerana izay fantatra fa manatanteraka izany asa ratsy izany, miaraka amina teknisiana mpikirakira solosaina mba hisavana izany hatrany ifotony », hoy ny tale jeneralin’ny ATT.
Tsy te-handany vola 10 000 ariary no saran’ny fanamboarana ny taratasy fahazoan-dàlana manokana eny anivon’ny ATT, 1 000 ariary kosa anefa no ividianan’ireo mpitatitra sasany izany eny amin’ireo « cybercafé ».
« Mora kokoa sady tsy dia mandany fotoana ny fanaovana taratasy fahazoan-dàlana manokana eny amin’ny cybercafé. Ny fanaovana sonia sisa no atao eny amin’ny ATT izay efa misy olona miandraikitra sy mandray an-tànana », hoy ny tompom-piara iray isan’ny mpaka fahazoan-dàlana manokana eny amin’ny « cybercafé ». Nanda sy nilaza ho tsy mahafantatra ny fisian’izany anefa ny tompon’andraikitry ny ATT.
Hatramin’izao dia avy amin’ny fiaraha-miasa amin’ny zandary izay manao fisavana ka mahasarona izany taratasy hosoka izany no ahafantaran’ny tompon’andraikitry ny ATT ny fisiany.